people Nepal » आकाशियो खाद्यान्नको भाउ, कुनको मूल्य कति पुग्यो ? आकाशियो खाद्यान्नको भाउ, कुनको मूल्य कति पुग्यो ? – people Nepal
आकाशियो खाद्यान्नको भाउ, कुनको मूल्य कति पुग्यो ?
Posted on January 7, 2020 by Durga Panta
पछिल्लो एक महिनाको बीचमा दैनिक उपभोग्य सामानको भाउ आकाशिएको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सर्वसाधारणको भान्सामा परेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सीता शर्माले लेखेकी छिन् ।
चिनीमा प्रतिकेजी प्रतिकेजी ८० रुपियाँबाट बढेर ८५ रुपियाँ प्रतिकेजीमा कारोबार भइरहेको छ भने तेलमा पनि प्रतिलिटर १० देखि ५० रुपियाँसम्म बढेको छ ।